Le Talisman brisé en français-malgache | RFI SAVOIRS
« Henoy ny rivotra, ny Sahara no mitomany. Miandry ilay olona mahitsy sy manam-panahy izy hamerina azy ho maitso indray. »
Kama na Kwamé dia mpanao zaridaina. Tsy nety hadinony mihintsy ilay angano fitantaran’ny nenitoany azy fony izy mbola kely. Izany no nitarika azy ho any Burkina Faso, any amin’ny sisin-tanin’ny tany efitra, ary niasa tao amin’ny zaridaina andrana an’ny praofesora Omar.
Fa indray andro, nisy naka an-keriny teo ambany masony ny praofesora, izay vaky tao anatin’ny fifampitolomana ny ody fiarony sarobidy.
Nanomboka teo ary , ho an’i kwamé mpanao zaridaina tsy mahafantatra teny Frantsay, ny fiainana tsy ialan-doza : Noahiahian’ny polisy, noenjehana karazan’olona hafahafa, nanapa-kevitra izy ny hanao irery ny fanadihadiany mba hahitana ny praofesora.
Miaraka amin’ny fibadabadany amin’ny teny frantsay, izay nohatsarainy hatrany isaky ny fizaran’ny tantara, tamin’ny alalan’ny rakibolany sy ireo olona izay nifaneraserany, no nanarahan’i Kwamé ireo soritra samihafa izay nitondra azy, nitety ireo toerana manan-dazan’ny Sahara fahagola sy ny ony Niger, mba hanarahana dia ireo mpaka an-keriny.
Acte 1 : ny fakana an-keriny ny praofesora Omar
Mpikarakara zaridaina ao Gorom-Gorom, ao Burkina Faso i Kama na i Kwamé. Ny praofesora Omar Sèkou izay mpampiasa azy dia nisy naka an-keriny teo ambany masony. Tao anatin’ny fifampitolomana dia vaky ny ody fiarony.
Lasa i Kwamé nirotsaka nitady an’i Omar izay niasa ho an’ny fanamaitsoana ny tany efitra. Iza ary no naka azy an-keriny ? Misy ifandraisana amin’ny anganon’i Nenitoan’i kwamé ve ilay fakana an-keriny sy ilay ody fiaro hafahafa ?.
« Henoy ny rivotra, ny Sahara no mitomany. Tia hiverina ho maitso izy. Any andro, hisy lehilahy iray ho avy. Hanome aina indray ireo bozaka sy hazo… »
Acte 2 : namana sa fahavalo ?
Noahiahian’ny polisy ho mpiray tsikombakomba tamin’ilay fakana an-keriny ny mpampiasa azy, ny praofesora Omar, i Kwamé ka nosamborina. Nafahana madiodio izy rehefa hita fa nangataka vidim-panavotana ireto mpaka an-keriny ho takalon’ny famotsorana ny praofesora Omar.
Nifanatona tamin’i Nathalie i Kwamé satritra mahafantatra ilay angano koa izy io… Ny fanadihadiana nataony no nitondra an’i Kwamé hatrany Niger, tao amin’ny oniversitean’i Niamey.
Acte 3 : soritra maromaro vaovao
Teny an-dalana niaraka tamin’i Clément nandeha fiara, sy lakana, i Kwamé vao nanomboka nahafantatra ny momba ny asa izay nataon’ny mpampiasa azy, miompana amin’ny fototarazo ara-pambolena.
Tsy latsaky ny in-droa no efa natao ny hanalavitra azy amin’ny fanadihadiany : Tao ny fanapoizinana tamin’ny « Chapalo » tany Boubon ; tao koa ny fanakanana azy tsy hihaona tamin’ny praofesora Kouada tany Niamey.
Niaraka tamin’ny fanampian’i Nathalie dia hitany ny sasany tamin’ireo kôdy hamahana ilay rakitra misitery « Sahel vert ».
Acte 4 : teny am-panarahana ireo mpaka an-keriny
Ora no nenjehina ho an’ny fanavotana ny praofesora Omar : Nandrahona ny hamono azy ireo mpaka an-keriny raha ohatra ka tsy azon’izy ireo ny vidim-panavotana.
Nitady ireo soritra rehetra momba ireo praofesora Aboubakary sy Kouada sandoka i Kwamé sy Nathalie. Misy ifandraisana amin’ilay olona tsy dia mazava, fantatra amin’ny fanaovana kiliolio samihafa, ilay hoe Fendjougou, ve ireo olona ireo ?
Acte 5 : miha-tery ny fotoana
Ho hain’i Kwamé ve ny hanakana izay mety ho fanafihana maherivaika ataon’ny polisy ary koa hanavotra « Ilay olona mahitsy sy manam-panahy » ?
Tanaty haizina, sy toerana tsy hay idirana no holalaovina ny sehatra farany !
Mitam-piadiana avokoa ny olon’i Fendjougou, toy izany koa ny polisy, efa vonona ny vidim-panavotana : 100.000 euros izay mety haka fanahy koa olona sasany hafa…
Publié le 16/11/2016 - Modifié le 25/10/2019